Cunto: Noocyada qoraalka ah ee lagaa rabo inaad ogaatid
Maalmihii hore ee mashiinka raadinta isbeddelka, macalimiintu waxay ogaadeen in ereyada muhiimka ah ee ku jira backlinks iyo qoraalka kumbuyuutarku uu ku caawin lahaa boggooda xarfaha raadinta. Google ma hubin karo mawduucyada bogagga oo dhan gacanta, sidaas awgeed waxay ku xiran tahay calaamadahaas si loo kordhiyo ama loo yareeyo rikoodhka bogga.
Frank Abagnale, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Sare Maamulaha Guusha Macaamiil, wuxuu xusay in sida kaliya ee xeeladaha iyo hababka kala duwan ee SEO ah, qoraalka koodhka ayaa qayb muhiim ah ka noqday shabakadaha ganacsiga.
Qoraalka qoraalka iyo Penguin cusbooneysiinta:
Penguin 2 - rent dell laptop.0 marwalba waxay ka wada hadashaa bulshooyinka SEO iyo warbaahinta bulshada, waxayna noqotey mid magac leh, sababtoo ah waxay diiradda saaraysaa qoraalada. Dib ugu noqosho 2016, Google ayaa dib u dhigtay gadaasha boggaga kuwaas oo isticmaala ereyo muhiim ah oo lagu xayeysiinayo qoraallada qoraalka ah oo ay isku xireen boggooda spam. Halkan waxaan ka wada hadalnay toddobada nooc ee qoraalka ah ee aad iska ilaalineyso si looga hortago calanka Google.
1. EMDs waxay u isticmaashaa ilaa 60% isugeyn la midaysan oo aan lahayn ganaaxyo:
Shabakadaha qaar, oo leh magac ama magac domain ahaan lacag ahaan, waxay leeyihiin ilaa boqolkiiba lixda isdhexgalka, iyo qaybta ugu fiican waxay tahay in kalluumeysatadu aanay u horseedi doonin ganaaxyada raadinta makiinada.
2. Non-EMDs waxay isticmaashaa 1 illaa 3% ee kantaroolayaasha isbarbardhigaya:
Waa ammaan in la yiraahdo non-EMD-yada waxay isticmaashaa hal ilaa seddex boqolkiiba kantaroolyada is-dhexgalka. Tusaale ahaan, haddii erayga muhiimka ah "money" ee kaaga duwan yahay magaca calaamad ama domain, tirada koontooyinka isbarbardhiga ahi waxay noqon karaan kuwo ka hooseeya ama u dhigma boqolkiiba saddex. Goobaha intooda badani waxay hirgeliyaan istaraatijiyado kala duwanaansho si habboon; Tani, waxay isku daraan ereyada muhiimka ah oo leh ereyo iyo isku mid ah. Sababtoo ah, tirada nambarada isbarbardhiga ah, calaamadaha muhiimka ah ee dheeraadka ah iyo kaneecooyinka la midka ah ayaa kor u kaca ilaa konton boqolkiiba internetka. Bedel ahaan, marka magaca calaamadda iyo domain uusan la mid noqonin ereyga "lacagta", boqolkiiba xariirka soo-galootiga ah sida qoraalka kumbuyuutarku wuxuu noqonayaa hal ilaa toddoba boqolkiiba..
3. URL qaawan waxaa badanaa loo adeegsadaa sidii ansaar:
Waa ammaan inaad xusuusatid in tirada URL-yada aan qaan-tirneyn ee leh qoraalka istaandarada ay sii kordhayaan maalin kasta. Tirade badan (20-40%) URL-yada qaawan ayaa loo adeegsaday websaydhiyaal iyo bloggers waxaana lagu aqoonsanayaa magac caan ah, sida namecheap.com (45% URL-yada lagu xiro), sigaar-cabbitaanka (95%) iyo hotel.com (in ka badan 50%).
4. Kursiga aan shaaca laga qaadin waa mid yar:
Tirada kumbiyuutarrada aan shaaca laga qaadin waxay u dhexeysaa laba ilaa shan boqolkiiba oo keliya.
5. Kaararka luqadaha kale waa nooca yar:
Tirada ereyada muhiimka ah ee luqadaha aan Ingiriisiga ahayn waxay u dhaxeysaa 0.3% ilaa 0.7% halkii markab ama domain.
6. Magaca calaamadaha ama calaamadaha muhiimka ah:
Magacyada iyo calaamadaha muhiimka ah ayaa loo isticmaali karaa si looga fogaado calanka Google. Hubi in magaca magacaaga aad doorato uu yahay mid gaar ah oo cajiib ah.
7. Xiriirinta muuqaalka iyo qoraalka sare ee la soo rogay:
Qoraalka hoose ee ku xirnaanta sawirkaaga waa mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan. Waa inaad si joogta ah u isticmaashaa si aad u xaqiijiso muuqaalkaaga bogga internetka.
Xogtaasi waxay muujineysaa sida loo qaybiyo qoraalka ku dhegan meelo kala duwan. Waxaad isticmaali kartaa mid kasta oo ka mid ah hababkaas si aad uga fogaato ciqaabta Google iyo inaad xeeladahaaga SEO ka dhigto mid xasillan ka hor.